Isambrela yelanga, iMvula yeambrela, Isambrela esongelayo-DongFangZhanXin
Jinjiang Zhanxin Umbrella Co., Ltd yasekwa ngo-1998.
Ngaphezulu kwama-50acres nge-1st i-fiberglass eluhlaza ekhiqiza isakhiwo, 2nd Isakhiwo somhlangano wendibano yocweyo, 3rd isakhiwo seofisi, 4th Indawo yokuhlala abasebenzi, 5th Ukwakhiwa kwemveliso yeambrela.Kukho abasebenzi abangama-400 abanobuchule abanamava angaphezu kwama-15years okuvelisa amava, sigxila kwisakhelo sokuvelisa kunye nakwisambrela. Iimveliso zethu eziphambili kubandakanya isambrela sokusonga, isambrela yabantwana, isambrela ethe ngqo, isambrela segalufa, isambrela sangaphandle kunye neambrela zesiko loyilo. I-Zhanxin Umbrella ifumene i-ISO9001, i-BSIC, iSedex, iAvon, uphicotho lweDisney. Umgangatho weambrela uphumelele i-REACH, EN71, ROSH, PAH, esemgangathweni yeAzo-Free.
I-ASD MARKET WEEK yenye yemiboniso emikhulu eUnited States ukusukela ngo-1961 inabantu abangaphezulu kwama-2700 kunye nabathengisi abangama-45000 abavela kwihlabathi liphela abazimase umsitho obanjwa kabini ngonyaka, obubanjwe ngoMatshi nango-Agasti. I-ASD yindawo yemarike eyomeleleyo neyandayo edibanisa iintlobo ngeentlobo zehlabathi zentengiso ezivela kubathengisi abangaphezulu kwama-2700 kumdlalo omnye osebenzayo, wokutya-iimveliso. Umboniso weASD ubandakanya: Isipho kunye neKhaya; Izixhobo zeFashoni; Imali yobucwebe & Ukuhamba; Impilo & Ubuhle njl.
Ikomkhulu lethu eliseXiamen City, igama le-OVIDA ejolise ekumanyeni nasekulweleni i-Innovation, sisebenzisa amava ethu enkonzo kunye nenkonzo ukunceda yonke iprojekthi yakho ukuba yenzeke. Ukunika elona xabiso kunye nenkonzo kwiprojekthi yeambrela yeyona nto ibaluleke kakhulu emsebenzini we-Ovida wemihla ngemihla. Ukwenza iiambrela ezenziwe ngokwezifiso ngowona msebenzi uphambili wemihla ngemihla. Ngenxa yoko siyabandakanyeka ekufumaneni isambrela esifanelekileyo kubo bonke abantu abajongana nezinto zokwazisa. Ke ngoko abayili bethu, amagcisa kunye nabathengisi baya kubonelela ngokukhululeka kwabaxhasi ngaxeshanye ukunceda iprojekthi ukuba yenzeke. Iqela lethu le-QC liya kulandela amanyathelo ngamanyathelo okuvelisa isambrela, sithumele umva nge-AQL 2.4 kwiSebe lethu lezentengiso, le nkqubela phambili iqinisekisa ukuba abathengi nganye banemigangatho esemgangathweni ophezulu xa sifika.
Umbala Fibreglass Windproof Zenzekelayo Iambrela W ...
Ehlotyeni yangaphandle Mist Fan kupholile Electric Umb ...
Manual Open C Hook Handle Layer Double Reverse ...
Ulwaleko Double Iambrela kunye C-Waxonxa Ha ...
Zenzekelayo Multi umbala Storm ubungqina 360 ukolula S ...
Kwilizwe lethu, ukuqonda kweambrela kukhumbuza ngakumbi indawo ezintle zemvula kunye nenkungu Jiangnan ukuya ...
EJapan, umbala weenkcubeko kwiambrela wahlukile kakhulu
Iiambrela zidlala indima ebaluleke kakhulu kubomi bethu. Ngokuqinisekileyo ayinakwahlulwa kwiiambrela ngeentsuku zeemvula. Emva kwayo yonke loo nto, akukho nto ilunge ngakumbi ...
Inxalenye ebalulekileyo yeambrela kukuma kwesambrela kunye nelaphu lesambrela
Ngenkqubela phambili yamaxesha, iiambrela ngokuthe ngcembe ziye zaba yimfuneko kubomi bethu. Emva kwayo yonke loo nto, kukho imeko engalindelekanga ...
Ukuthandwa kakhulu kweambrela, ukungena kubomi bemihla ngemihla babantu
Namhlanje sineentlobo ezininzi zendlela yokuprinta kwiambrela. Ezifana yoshicilelo screen isilika, ushicilelo transfer ubushushu. Apha ngezantsi kukho ividiyo yokushicilela yesilika ...
Ngaba uyazi ukusika ilaphu leambrela kwiipaneli? Landela i-Ovida isambrela sefektri, uya kuyazi ngakumbi inkqubela yeambrela. Kuqala kufuneka cutti ...